स्वास्थ्यमन्त्रीको बोली एउटा, वास्तविकता अर्कै - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home भर्खरै स्वास्थ्यमन्त्रीको बोली एउटा, वास्तविकता अर्कै
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले १५ असारदेखि दैनिक १० हजार जनाको कोरोना परीक्षण गरिने बताए पनि पछिल्लो एक सातामा परीक्षण दर भने खुम्चिँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले आज (सोमबार)देखि दैनिक १० हजारको हाराहारीमा कोरोना परीक्षण गर्ने गरी तयारी भएको बताए । उनले भने, ‘दैनिक आठ हजार जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि भएको छ ।’
पछिल्लो एक सातामा ४० हजार ६ सय ६६ जनाको आरटी–पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । गत सोमबार ६ हजार एक सय ९८, मंगलबार चार हजार नौ सय ९५ र बुधबार ६ हजार आठ सय २८ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । यस्तै, गत बिहीबार ६ हजार पाँच सय ४३, शुक्रबार ६ हजार पाँच सय ३४, शनिवार चार हजार ६ सय ६ र आइतबार चार हजार ९ सय ६२ जनाको कोरोना परीक्षण भएको थियो ।
हालसम्म १२ हजार ७ सय ७२ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । आइतबार थप चार सय ६३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या १२ हजार ७ सय ७२ पुगेको हो ।
हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या तीन हजार १३ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । कुल संक्रमितमध्ये २८ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभर रहेका प्रयोगशालामा निकै न्यून मात्रामा नमुनाहरू आएका कारण परीक्षणको दायरा कम हुँदै गएको पाइएको छ । सरकारले ‘नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड १९’ मापदण्ड बनाएर परीक्षणको दायरालाई खुम्चाउँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको भन्दै परीक्षणको दायरा बढाउने सवालमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले ६१ हजार सात सय ३१ जना क्वारेन्टिनमा छन् । अब कति नागरिक भित्रिन्छन् भन्ने कुराले पनि परीक्षण बढाउने या स्थिर राख्ने निर्धारण गर्छ ।’